Ngwaahia Service - Zhongshan City YALIS Hardware Products Co., Ltd.
Ngwunye ọnụ ụzọ nwere mmetụta dị mkpa maka ọdịnihu nke ndị nrụpụta ụzọ. Ezigbo ihe eji edozi ngwongwo ụzọ ga - abụ ọ bụghị naanị inye ndị na - emepụta ụzọ ọnụ ụzọ zụta usoro ngwaike ọnụ ụzọ zuru oke, kamakwa nwee ike ịkwado mmepe ngwaahịa ndị na - emepụta ọnụ ụzọ ma nye nnukwu nkwado maka ndị na - emepụta ụzọ. . N'ụzọ dị otú a, ọ nwere ike ọ bụghị naanị ịchekwa oge na ego ọrụ mmadụ nke ndị na-emepụta ụzọ mgbe ha na-azụ ihe, kamakwa ịkwalite ikike nyocha na ikike mmepe nke ndị nrụpụta ụzọ.
Na nzaghachi maka mkpa ndị nrụpụta ụzọ maka ndị na-eweta ngwongwo ngwaike ụzọ, YALIS, dịka onye na-eweta ihe ngwaike ngwaike ọrụ ụzọ, etinyela akara ngwaahịa ya na ụlọ ọrụ ya iji gboo mkpa ndị nrụpụta ụzọ.
YALIS amalitela iji nwayọọ nwayọọ guzobe ndị otu R&D nke ya na mbido ntọala ya. Ka ọ dị ugbu a, ndị otu YALIS R & D nwere injinia injinịa, injinia usoro na ndị na-esepụta ihe, nke nwere ike izute mkpa ahịa ndị ahịa dịka mmepe ngwaahịa, ọdịdị ọdịdị, na ọrụ aka. Ọbụghị naanị nke ahụ, YALIS nwere ụlọ ọrụ nke ya, nke nwere ike ịnye ọrụ otu ọrụ maka mmepe ngwaahịa na imewe, mbipụta 3D, ịkpụzi ebu, usoro ịkpụzi, nnwale nnwale, na imepụta oke, na-ebelata nkwukọrịta ụgwọ site na mmepe ngwaahịa ọhụụ gaa na imepụta ihe , na imekọ ihe ọnụ.
Na mgbakwunye na ike ahaziri, YALIS agbakwunyela ngwaahịa ahịrị nke akụrụngwa ngwaike ọnụ ụzọ, dị ka ọnụ ụzọ, ọnụ ụzọ, wdg, iji gboo mkpa nke ndị nrụpụta ụzọ. Nke mere na ọnụ ụzọ ahụ enweghị ike iru naanị ọrụ achọrọ, kamakwa leba anya na ịma mma nke ọnụ ụzọ ahụ. Ma ebe ọ bụ na YALIS na-enye zụrụ ihe eji arụ ụzọ, ọ na-echekwa oge na mbọ iji zụta ngwa ngwaike ụzọ ndị ọzọ sitere n'aka ndị na - eweta ụzọ.
Ahụmịhe Ndị Ọrụ Na Ọrụ Emebere orzọ
Ebe ọ bụ na YALIS kpebisiri ike atụmatụ ya iji mekwuo mmekọrịta ya na ndị na-emepụta ọnụ ụzọ na 2018, ọ gbakwunyela ndị otu na-arụ ọrụ ụzọ na ndị ahịa ya, bụ ndị raara onwe ha nye ịgbaso ndị nrụpụta ụzọ iji melite ọrụ maka ndị nrụpụta ụzọ ma dozie nsogbu ha n'oge. Na mmepụta, YALIS webatara sistemụ njikwa njikwa ISO na akụrụngwa mmepụta akpaka iji bulie ikike mmepụta ma hụ na ikike nnyefe ya.
YALIS bụ onye na-eweta ngwaike ngwaike ụzọ nwere ihe karịrị afọ 10, ahụmịhe ya bara ụba na ikike ọkachamara, nwere ike inyere ndị na-emepụta ụzọ aka ịmepe emepe ka mma ma nwee ọganiihu.